Mayelana - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Isimo sengqondo sinquma konke, imininingwane inquma impumelelo
I-Ouzhan (Shanghai) Co., Ltd.yinkampani ehlanganisa imboni kanye nezohwebo. Le mboni itholakala kuBuilding 38, Jinguo Industrial Park, No. 500, Zhenkang Road, Jinshan District, Shanghai. Le nkampani ihlanganisa indawo engamamitha-skwele ayi-1200 futhi inabaqhubi abangaba ngu-30, onjiniyela abayi-10 nabahloli bekhwalithi aba-5. Imishini ephezulu yokukhiqiza nokucubungula ephezulu ngaphezu kwama-30. Abalingani bethu bahlanganisa iTrutzschler, iGuzzini, SafeFire, FujiXerox, Ghrepower, Reco njalonjalo.
I-Ouzhan Trade (Shanghai) Co, Ltd. igxile ekucutshungulweni okwenziwe ngokwezifiso zazo zonke izinhlobo zemishini nezingxenye zemishini. Ukucubungula kwethu ubuchwepheshe kufaka i-CNC milling, i-CNC turning, ukugaya kwangaphakathi nangaphandle kwangaphandle, ukusika kwe-Laser kanye nokugoba kwensimbi. CNC machining, Turn-milling machining, 4/5-eksisi CNC machining, UKWAKHA nokufa-ekubunjweni nokunye.
Imikhiqizo yethu isetshenziswa emikhakheni ehlukahlukene, njengendwangu yemishini, ukukhiqizwa kwamandla omoya, imishini yaselebhu, amadivayisi wezokwelapha, ukukhanyisa kwezohwebo, i-aerospace njalonjalo.
1. Izinsiza kusebenza Zokukhiqiza ze-Hi-Tech
Imishini yethu yokukhiqiza eyinhloko ingeniswe isuka eSwitzerland naseJapan.
2. Amandla we-R & D aqinile
Sinabanjiniyela abayi-10 esikhungweni sethu se-R & D, bonke bangodokotela noma oprofesa base-University of Science and Technology of China.
3.Ukulawulwa Kwekhwalithi Okuqinile
Sinezisebenzi zokuhlola ikhwalithi yobuchwepheshe nezinsizakusebenza, ngokuya ngamazinga wamazwe omhlaba kwimikhiqizo yakho ongayihlola, bese ukhipha umbiko wokuhlolwa oningiliziwe.
4. I-OEM ne-ODM iyamukeleka
Osayizi ngezifiso kanye bobunjwa ayatholakala. Uyemukelwa ukwabelana ngemidwebo yakho ye-2D noma ye-3D nathi, ake sisebenzisane ukwenza impilo ibe nobuciko ngokwengeziwe.
Okwamanje sinabanikazi abangaphezu kuka-30 amasethi imishini eziphambili nokuhlolwa eziphambili, iningi lazo amazwe kusuka eSwitzerland naseJapane.
I-Ouzhan inezintambo eziyisishiyagalombili zokukhiqiza futhi ingaveza izingcezu ezingama-3000 zemikhiqizo eqediwe ngosuku olulodwa.
Sine-ejenti yethu yezokuhwebelana yomhlaba wonke endaweni yasendaweni, futhi sihlala siqeda umkhiqizo ngesikhathi, ongathunyelwa emachwebeni olwandle noma ezikhumulweni zezindiza ngosuku olufanayo.
Imikhiqizo yethu izohlolwa kathathu ngaphambi kokuthunyelwa: ① Umtshina ozenzakalelayo; Det Ukubona okwenziwa ngesandla; Test Isampula test. Ekugcineni, khipha umbiko wokuhlolwa.
Ubuchwepheshe, ukukhiqiza nokuhlola
I-Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. yasungulwa ngo-2005 futhi ibilokhu ikhiqiza izingxenye zemishini iminyaka engu-15. Kusukela kwaqala, ngemuva kokuthola imidwebo yamakhasimende ye-3D noma ye-CAD, onjiniyela bethu bazozihlaziya. Ngesisekelo sokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende, singavame ukubeka iziphakamiso zobuchwepheshe ukonga izindleko zamakhasimende noma ukugcwalisa kangcono umkhiqizo.
Kepha kulawo makhasimende angenayo imidwebo, ama-injers ethu angakusiza.
1. Uma unomkhiqizo ongekho eshalofini ofuna siwukhiqize, kodwa ungenayo imidwebo ye-3D, udinga nje ukuthumela umkhiqizo wakho kithi, singakwazi ukudweba imidwebo yawo bese uqala ukukhiqiza.
2. Uma ungenawo umkhiqizo noma imidwebo, kulungile. Vele wabelane ngemibono yakho nathi. Onjiniyela bethu bazoklama imidwebo ngokuya ngezidingo zakho bese bayithumela kuwe ukuze uqinisekise ngemuva kokuhlolwa.
I-Ouzhan njengamanje inabasebenzi abangaphezu kwama-30 kanti ngaphezu kuka-10% baneziqu zeMasters noma zeDokotela. Onjiniyela bethu abayishumi bonke bathweswe iziqu emanyuvesi aphezulu aseChina asebenze ngemishini futhi banolwazi olunothile lobuchwepheshe. Abasebenzi bethu bokuhweba bakwamanye amazwe bangabaphothule iziqu zobuchwepheshe bokuhweba bamanye amazwe, abanekhono kunqubo yokuhweba kwamanye amazwe. Iminyango emibili yenkampani yethu ingasiza futhi ikulethele insiza enhle kakhulu.
Isiko lenkampani lenkampani lingakhiwa kuphela nge-Impact, infiltration and Integration. Ukuthuthukiswa kwe-Ouzhan kusekwe ngamanani wakhe abalulekile kule minyaka edlule ------- Ukwethembeka, Ukuqamba, Isibopho, Ukubambisana.
I-Ouzhan ihlale inamathela esimisweni, okuqondiswe kubantu, ukuphathwa kobuqotho, ikhwalithi enkulu, idumela le-premium Ukuthembeka sekuyikho umthombo wangempela wonqenqema lokuncintisana luka-Ouzhan.
Ukuba nomoya onjalo, sithathe zonke izinyathelo ngendlela ezinzile futhi eqinile.
Ukuqamba kungumongo wesiko lika-Ouzhan.
Ukuqamba okusha kuholela entuthukweni, okuholela ekwandeni kwamandla.
I-Ouzhan inomqondo oqinile wokuzibophezela kanye nomsebenzi kumakhasimende nomphakathi.
Bekulokhu kungamandla okuqhubela phambili ukuthuthukiswa kwe-OuZhan.
U-Ouzhan ukwazile ukufeza ukuhlanganiswa kwezinsizakusebenza, ukuhambisana ngokubambisana, njengomnyango wethu wezobuchwepheshe kanye nomnyango wethu wezohwebo, vumela abantu abangochwepheshe ukuthi badlale ngokugcwele ekukhetheni kwabo.
1.Izinsizakalo zemishini eyenziwe ngezifiso
2. Ukukhiqizwa kweMisa
3. Umklamo womkhiqizo
4. Ukwenza isampula
5. Ukwesekwa kwezobuchwepheshe
6. Ukuhlolwa komkhiqizo
7. Insizakalo yezimpahla kanye nokuthumela izinto kwamanye amazwe
8. Isevisi yokuthengisa ngemuva